Apple inotangisa iyo yechishanu beta yeIOS 11.2 yevagadziri | IPhone nhau
Vakomana vanobva kuCupertino vachangobva kuvhura iyo yechishanu beta yeIOS 11.2, beta inosvika kana iyi beta ichangopfuura mwedzi mukutenderera uye kuti svondo rapfuura anga ari pazororo kunotenga paChishanu Chishanu. Iyi beta nyowani yeIOS, inotarisa kugadzirisa mamwe mashandiro uye mashandiro ekuita ayo mamwe ma terminals aratidza, pamwe nepo gadzirisa iyo bug iyo iyo Calculator application inotiratidza, bug inoratidzwa patinoishandisa nekukurumidza kupfuura zvakajairwa, nekuda kwemifananidzo iyo yega yega inotiratidza. Asi haisiriyo yega ruzivo, kunyange iri imwe yezvakanyanya kukosha.
Uye ini ndinoti chimwe chezvakakosha nekuti Apple haisati yaratidza zviratidzo zvekumisikidza kamwechete uye nekuwiriranisa meseji kuburikidza neICloud, chiziviso icho chakaitwa kumusangano wevabudisi wavakaita muna Chikumi wapfuura, asi kuti ingangoita mwedzi misere gare gare. haisati yaonekwa kana muchikamu che beta.
Chimwe chinhu chitsva chinosvika, kana chinofanira kusvika neichi chigadziriso chinowanikwa muApple Pay Cash chikwama, basa rinotibvumidza tumira mari kushamwari kana mhuri yedu kuburikidza neyekushandisa meseji nekukurumidza uye nyore.
Mune ino inotevera iOS 11 yekuvandudza, Apple inotora mukana we wedzera matatu matsva akasarudzika mapikicha eiyo iPhone X, mapikicha ayo achakurumidza kuwanikwa kune veruzhinji kuburikidza neramangwana reIOS inogadziridza kana kuburikidza nemugadziri ane nguva yekuabvisa kubva ku iPhone nekuajairira iwo akasiyana masikirini masikisi eiyo iPhone nePad, saka isu tinongofanirwa kuva ne moyo murefu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inoburitsa yechishanu beta yeIOS 11.2 yevagadziri
Mwedzi nemwedzi yekumirira kuti uwane mamwe matsva mapikicha. Kupera kwechiziviso pamusoro penyaya nekugadziriswa.
Barcelona ichave iri rinotevera guta rine veruzhinji mafambiro ekufambisa paApple Mepu